BUDDHIST TERMS' Dictionary: REALM OF CONTINUOUS SUFFERING - နိရယ
REALM OF CONTINUOUS SUFFERING - နိရယ
REALM OF CONTINUOUS SUFFERING Niraya
နိရယ - ငရဲဘုံ၊ ချမ်းသာကင်းပြီး ဆင်းရဲခြင်းအတိပြီးသော ဘုံဘ၀။
ငရဲသားများသည် ငရဲထိန်းနှင့် ငရဲခွေးတို့၏ နှိပ်စက်မှုကို အမြဲခံနေကြရသည်။ ငရဲမီးလောင်မှုကို အမြဲခံစားနေရသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ဒုက္ခဝေဒနာို ခံစားနေရသော်လည်း အသက်မသေနိုင်။ အကုသိုလ်ကံမကုန်သေးသမျှ အသက်ရှင်လျက် ဆက်လက်တည်နေရသည်။ အကုသိုလ်ကံ ကုန်ဆုံးမှ ငရဲသားဘ၀ လွတ်မြောက်၍ အခြားဘ၀သို့ ကူးပြောင်းနိုင်သည်။
Beings reborn in the realms of continuous suffering, niraya, are continuously tortured by the warders and blood hounds. However much they suffer pain, they do not die, for they are born to suffer foralong long time. Only when the kammic force that had led them to suchapainful existence has spent itself can they get their release, to be reborn in another plance of existence.